Uyemukelwa kuWoopShop.com. Ngenkathi upheqa noma uthenga kusuka ku-WoopShop.com, ubumfihlo bakho nolwazi lwakho lomuntu siqu luyavikelwa futhi luyahlonishwa. IWoopShop.com inikela ngezinsizakalo ezingcono kakhulu kuwe ngokuya ngezaziso, imigomo nemibandela ebekwe kuleli khasi.
I-1. Inqubomgomo yobumfihlo
• IWoopShop.com ihlonipha ubumfihlo bazo zonke izivakashi noma amakhasimende ewebhusayithi futhi uthathe ukuphepha kwakho ku-inthanethi ngokungathi sína.
• IWoopShop.com iqoqa imininingwane ifaka i-imeyili yakho, igama, igama lenkampani, ikheli lomgwaqo, ikhodi yeposi, idolobha, izwe, inombolo yocingo, iphasiwedi nokunye, okokuqala, sisebenzisa amakhukhi adingekayo ukuhlanganisa nokuhlanganisa okungafani- imininingwane engakhonjwa uqobo mayelana nabavakashi besiza sethu. Imininingwane ihlukile kuwe. Abasebenzisi, noma kunjalo, bangavakashela isayithi lethu ngokungaziwa. Sizoqoqa imininingwane yokuhlonza komuntu kusuka kubasebenzisi kuphela uma ngokuzithandela bethumela imininingwane enjalo kithi. Abasebenzisi bangahlala benqaba ukunikezela ngemininingwane yokuhlonza uqobo, ngaphandle kokuthi kungabavimba ekubandakanyeni kwezinye izinto ezihlobene neSayithi.
• Singase siqoqe imininingwane yokuhlonza mathupha kubasebenzisi ngezindlela ezahlukahlukene, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, lapho Abasebenzisi bevakashela isiza sethu, bebhalisa kusayithi, befaka i-oda, bephendula inhlolovo, begcwalisa ifomu, futhi bexhumana ngeminye imisebenzi, izinsizakalo, izici noma izinsiza esizenza zitholakale eSizeni sethu. Abasebenzisi bangacelwa, ngokufanelekile, igama, ikheli le-imeyili, ikheli lokuposa.
• Sisebenzisa lolu lwazi ukusisiza senze kube lula kakhulu ukuthi ukwazi ukukusebenzisa, ukuphendula izicelo noma izikhalazo, ukusisiza sibonise okukufanele kakhulu futhi sikukhumbuze ngemininingwane emisha, imikhiqizo enentengiso, amakhuphoni, ukukhushulwa okukhethekile nokunye vula.
• Ngesikhathi sokubhalisa kwakho, uzokwaziswa ukuthi usinike igama lakho, ikheli lokuthumela nelokukhokha, inombolo yocingo nekheli le-imeyili. Lezi zinhlobo zolwazi lomuntu siqu zisetshenziselwa izinhloso zokukhokha, ukufeza ama-oda akho. Uma sinezinkinga lapho sicubungula i-oda lakho, singasebenzisa imininingwane yakho oyinikezayo ukuxhumana nawe.
• Ungazikhipha ohlwini ngokusebenzisa isixhumanisi esivela kunoma iyiphi i-newsletter ye-imeyili noma isilungiselelo sakho sokubhaliselwe komuntu siqu ngemuva kokungena ngemvume.
• Singase siqoqe imininingwane engeyona yomuntu siqu mayelana nabasebenzisi noma nini lapho bexhumana neSayithi lethu. Imininingwane yokuhlonza okungeyona eyeyakho ingafaka igama lesiphequluli, uhlobo lwekhompyutha nolwazi lobuchwepheshe mayelana nezindlela zabasebenzisi zokuxhumana neSayithi lethu, njengohlelo lokusebenza nabahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi abasetshenzisiwe nolunye ulwazi olufanayo.
• Isayithi lethu lingasebenzisa "amakhukhi" ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi, singasebenzisa amakhukhi avela eceleni avela kuTrustpilot noma enye insizakalo. Isiphequluli sewebhu somsebenzisi sibeka amakhukhi ku-hard drive yawo ngezinjongo zokugcina amarekhodi futhi kwesinye isikhathi ukulandelela imininingwane ngawo. Abasebenzisi bangakhetha ukusetha isiphequluli sabo sewebhu ukuthi senqabe amakhukhi noma bakwazise lapho kuthunyelwa amakhukhi. Uma benza kanjalo, qaphela ukuthi ezinye izingxenye zeSayithi kungenzeka zingasebenzi kahle.
• I-WoopShop iqoqa futhi isebenzise imininingwane yabasebenzisi ngezinhloso ezilandelayo:
(1) Ukwenza kube ngokwakho isipiliyoni somsebenzisi
Singasebenzisa ulwazi sesisonke ukuba baqonde indlela Abasebenzisi bethu njengeqembu zisebenzisa amasevisi nezisetshenziswa enikeziwe kwisayithi yethu.
(2) Ukuthuthukisa indawo yethu
Siqhubeka silwela ukuthuthukisa iminikelo yethu yewebhu ngokusekelwe kolwazi kanye nempendulo esiyithola kuwe.
(3) Ukwenza ngcono inkonzo yamakhasimende
Imininingwane yakho isisiza ukuthi siphendule ngokwengeziwe izicelo zakho zesevisi yamakhasimende nezidingo zokusekela.
(4) Ukucubungula okwenziwayo
Singaphinde futhi sisebenzise ulwazi Abasebenzisi ahlinzeke ngabo lapho bahambisa oda kuphela ukunikeza isevisi ukuthi oda. Asazi ukwabelana nobani lolu lwazi amaqembu ngaphandle ngaphandle kwaze kwaba sezingeni elidingekayo ukuze kunikezwe ngesevisi.
(5) Ukuphatha okuqukethwe, iphromoshini, inhlolovo noma esinye isici seSayithi
Ukuthumela Abasebenzisi ulwazi wavuma ukulethelwa mayelana nezihloko sicabanga kuyoba nesithakazelo kubo.
(6) Ukuthumela ama-imeyili ngezikhathi ezithile
Ikheli le-imeyili Abasebenzisi banikeza ukucubungulwa kwe-oda, kuzosetshenziselwa kuphela ukuthumela ulwazi kanye nezibuyekezo eziphathelene nomyalelo wabo. Kungasetshenziswa futhi ukuphendula imibuzo yabo, kanye / noma ezinye izicelo noma imibuzo. Uma Umsebenzisi ethatha ukungena ukungena ohlwini lwethu lokuposa, bayothola ama-imeyili angabandakanya izindaba zenkampani, izibuyekezo, ulwazi oluhlobene nomkhiqizo noma isevisi, njll. Uma kunoma yisiphi isikhathi uMsebenzisi angathanda ukuzikhiphela ohlwini lokuthola ama-imeyili esizayo, sifaka imininingwane imiyalelo yokuzikhiphela phansi ngaphansi kwe-imeyili ngayinye noma umsebenzisi angasithinta ngeSayithi lethu.
• Sisebenzisa ukuqoqwa kwedatha okufanele, ukugcinwa, kanye nemikhuba yokucubungula kanye nezinyathelo zokuphepha ukuvikela ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ekuguqulweni, ekudalweni noma ekucekelweni phansi kwemininingwane yakho, igama lomsebenzisi, iphasiwedi, imininingwane yokuthengiselana nedatha egcinwe eSizeni sethu.
• Asithengisi, asihwebi, noma siqasha imininingwane yabasebenzisi yokuhlonza abanye kwabanye. Singabelana ngemininingwane yabantu ejwayelekile ehlanganisiwe engaxhunyanisiwe kunoma yiluphi ulwazi lobunikazi mayelana nezivakashi nabasebenzisi nabalingani bethu bebhizinisi, izinhlangano ezithembekile nabakhangisi ngezinjongo ezichazwe ngenhla. Singasebenzisa abahlinzeki bezinsizakalo ezivela eceleni ukusisiza ukuqhuba ibhizinisi lethu neSayithi noma ukuphatha imisebenzi egameni lethu, njengokuthumela izincwadi zezindaba noma izinhlolovo. Singabelana ngolwazi lwakho nalezi zinkampani zangaphandle ngalezo zinhloso ezinqunyelwe uma ngabe usinike imvume yakho.
• Abasebenzisi bangathola ukukhangisa noma okunye okuqukethwe kwiSayithi lethu okuxhumanisa namasayithi kanye nezinsizakalo zabalingani bethu, abahlinzeki, abakhangisi, abaxhasi, abanikezeli bamalayisense nabanye abantu besithathu. Asikulawuli okuqukethwe noma izixhumanisi ezivela kulawa masayithi futhi azinacala ngezenzo ezisetshenziswa amawebhusayithi axhumene noma avela kuSayithi lethu. Ngaphezu kwalokho, lawa masayithi noma izinsizakalo, kufaka phakathi okuqukethwe kwazo kanye nezixhumanisi, kungahle kushintshe njalo. Lawa masayithi namasevisi angaba nezinqubomgomo zawo zobumfihlo nezinqubomgomo zesevisi yamakhasimende. Ukuphequlula nokuxhumana kunoma iyiphi enye iwebhusayithi, kufaka phakathi amawebhusayithi anokuxhumanisa neSayithi lethu, kungaphansi kwemigomo nezinqubomgomo zaleyo webhusayithi.
• Lesi sigaba senqubomgomo yobumfihlo sichaza ukuthi idatha yomuntu siqu isetshenziswa kanjani kumasevisi wokukhokha we-Apple (i-Apple iyakhokha). Ngaphezu kwalokho, kufanele ufunde imigomo nemibandela ye-Apple Pay. Imisebenzi yakho yebhizinisi ngeWoopShop ayihlobene ne-Apple Inc.
Uma usebenzisa i-Apple Pay ukukhokha, ungacela imininingwane yekhadi lasebhange, inani le-oda nekheli le-imeyili, kepha i-WoopShop ngeke iqoqe futhi igcine imininingwane efomini lakho, futhi ngeke yabelane nganoma yiluphi ulwazi lwakho lomuntu siqu ukukhangisa noma ezinye izikhungo zokusebenza nganoma yiluphi uhlobo.
• I-WoopShop inokubona kokuvuselela le nqubomgomo yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi. Sikhuthaza abasebenzisi ukuthi bahlole njalo leli khasi ukuthola noma yiziphi izinguquko ukuze bahlale benolwazi mayelana nokuthi sisiza kanjani ukuvikela imininingwane yomuntu esiyiqoqayo. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi kuyisibopho sakho ukubuyekeza le nqubomgomo yobumfihlo ngezikhathi ezithile futhi wazi ngokuguqulwa.
• Ngokusebenzisa leli Sayithi, usho ukwamukela kwakho le nqubomgomo. Uma ungavumelani nale nqubomgomo, sicela ungasebenzisi iSayithi lethu. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kweSayithi kulandela ukuthunyelwa kwezinguquko kule nqubomgomo kuzothathwa njengokuzamukela kwakho lezo zinguquko.
• Uma unemibuzo mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo, imikhuba yaleli sayithi, noma ukusebenzelana kwakho naleli sayithi, sicela uxhumane nathi ku-support@woopshop.com noma info@woopshop.com
• Umele futhi uqinisekisa ukuthi uneminyaka okungenani eyi-18 ubudala noma uvakashela iSayithi ngaphansi kweso labazali noma lomgcini wakho. Uzoba nesibopho sakho konke ukufinyelela nokusebenzisa le sayithi yinoma ngubani osebenzisa i-password kanye nokuhlonza okunikezwe wena ekuqaleni ukuthi ukufinyelela nokusebenzisa le sayithi kuvunyelwe nguwe noma cha.
• IWoopShop.com ingathumela ivela ezinqolobaneni ezihlukene. Kuma-oda anezinto ezingaphezu kweyodwa, singahlukanisa i-oda lakho libe ngamaphakeji amaningana ngokwamazinga esitoko ngokubona kwethu. Siyabonga ngokuqonda kwakho.
• Ngaphandle kwalapho kuhlinzekwe ngenye indlela kuleli khasi noma kusayithi, noma yini oyithumelayo noma oyithumela ku-WoopShop.com, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo, imibono, ulwazi, amasu, imibuzo, ukubuyekezwa, ukuphawula kanye neziphakamiso ngokuhlangene, izethulo zizophathwa njengokungeyona imfihlo nokungenayo impahla, futhi ngokuthumela noma ngokuthumela, uyavuma ukufaka ilayisense ngokungenakuphikiswa lokungena kanye nawo wonke amalungelo e-IP ahlobene nalokho ngaphandle kwamalungelo wokuziphatha afana nelungelo lobunikazi kuWoopShop.com ngaphandle kwenkokhiso kanti iWoopShop ngeke ibe nasebukhosini.
• Akufanele usebenzise ikheli le-imeyili elingelona iqiniso, uzenze omunye umuntu ongeyena uqobo lwakho, noma udukise iWoopShop.com noma izinkampani zangaphandle ngemvelaphi yokuthunyelwa noma okuqukethwe. IWoopSHop.com inga, kepha ngeke ibophezeleke ukususa noma ukuhlela noma yikuphi ukuthunyelwa kufaka phakathi ukuphawula noma ukubuyekezwa nganoma yisiphi isizathu.
• Yonke imibhalo, imidwebo, izithombe noma ezinye izithombe, izithonjana zezinkinobho, iziqeshana zomsindo, ama-logo, iziqubulo, amagama okuhweba noma isoftware yamagama nokunye okuqukethwe kuwebhusayithi yeWoopShop.com ngokuhlangene, Okuqukethwe, kungokukaWoopShop.com kuphela noma okuqukethwe kwayo okufanele abahlinzeki. Wonke amalungelo anganikezwanga ngokucacile agodliwe yi-WoopShop.com. Abaphula umthetho bazothathelwa izinyathelo zomthetho ngokugcwele.
• Sicela wazi ukuthi kungahle kube nama-oda athile esingakwazi ukuwamukela futhi kufanele siwakhansele. Womabili la maqembu ayavuma ukuthi, ngokulandela ukuthunyelwa kwe-oda, ezokuthutha kungukuphela kwesibopho senkampani yezokulungiselela evela eceleni. Ngalesi sigaba, ubunikazi ngokuphelele bomkhiqizo (bomkhiqizo) obomthengi; sonke isikweletu nezingozi ezihambisana nakho ngesikhathi sokuhamba kuzothwalwa ngumthengi.
• IWoopShop.com ingaqukatha izixhumanisi kwamanye amasayithi akwi-intanethi aphethwe futhi aqhutshwa ngabantu besithathu. Uyavuma ukuthi iWoopShop.com ayibophezelekile ekusebenzeni noma kokuqukethwe okutholakala kunoma iyiphi leyo sayithi.
• IWoopShop.com inelungelo lokushintsha le migomo nemibandela ngokuzayo ngaphandle kwesaziso.